पारु तिवारी/काठमाडौं । गरे के हुन्न ! यत्ति हो संघर्षबाटपछि हट्नु हुन्न । यसै भनाईलाई प्रमाणित गरेका छन् रारामार्टका सञ्चालक युवाहरुले । जापानबाट सुरु भएको रारामार्ट अनलाईन सपिङ्ग यतिबेला नेपाल हुँदै अमेरिकी बजारमा समेत प्रवेश गर्ने तयारीमा छ ।
जापानमा विद्यावारिधी गर्न गएका नेपाली युवा प्रकाशचन्द्र सापकोटा, डा. जीवन अंगाई, डा. भरतसिंह नेगी लगायतको अग्रसरतामा सुरुवात भएको रारामार्टले नेपालमा पनि अनलाइन मार्केटिङ थालेको छ । सन् २०१७ मा ५० लाख जापानिज येन लगानीमा जापानबाट सुरु भएका रारामार्टले नेपालमा अनलाइन मार्केटमा केही नयाँ अफर अघि सारेको छ ।
कम्पनीले रारामार्ट डटकम नेपालमार्फत जापानमा मात्र नभएर ग्लोबल मार्केटको अवधारणामा अनलाइन मार्टको सुरुवात गरिएको व्यवसायी प्रकाशचन्द्र सापकोटाले बताए । त्यसका लागि जापानबाट इन्टरनेशनल ट्रेडमार्क समेत लिइसकेको उनले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
सापकोटाकाअनुसार हाल नेपाल र जापानमा मात्र रहेको अनलाईन सपिङ्ग रारामार्ट अब अमेरिका लगायतका मुलुकमा पनि विस्तार गरिदैँछ । अमेरिकको टेक्सासमा कम्पनी दर्ता भईसकेको सापकोटाले बताए । उनले सन् २०२० को शुरुवातसँगै अमेरिकाबाट औपचारिक कारोबार शुभारम्भ हुने र सन् २०२१ मा भारतमा सार्वजनिक गरिने समेत जानकारी दिएका छन् ।
‘हामीले जापानबाट सानो लगानीबाट व्यवसाय शुरु गरेका थियौं । अन्तर्राष्ट्रिय ठूला–ठूला अनलाइन मार्टहरुको अगाडी हाम्रो प्रयास अत्यन्त सानो र नगन्य थियो तर हामीले हाम्रो कार्य क्षमता, लगाव र निरन्तरतालाई अघि बढाईरहयौं । अन्ततः सफलता मिल्दै गएको छ । अब हाम्रो लक्ष्य ग्लोबल मार्केट हो’ उनले भने । उनले थपे, ‘नेपालीहरुको प्रयत्नमा अब हामी ई–कर्मसद्वारा विश्वलाई जोड्दै छौं ।’ रारामार्ट अनलाईन मार्केट हो ।
यसमा सबै प्रकारका वस्तुहरु उपलब्ध हुन्छन् । हाल रारामार्ट नेपालमा सामान्य प्रोडक्टदेखि उच्च उच्च मुल्यका ५० हजारभन्दा बढी वस्तुहरु रहेका छन् । सियोदेखि गाडीसम्मका प्रोडक्ट उपलब्ध गराउने हाम्रो ‘रारामार्ट’ को लक्ष्य हो । अहिले हामीसँग २० हजार प्रोड्क्टहरु उपलब्ध छन् । उनले भने, ‘५० हजार हाम्रो टार्गेट हो ।’ सापकोटाले भने ।
रारामार्ट डटकमको प्रोडक्ट अन्य अनलाइन मार्टहरु र सामान्य खुद्रा पसलहरु भन्दा पनि सस्तो हुने सञ्चालक सापकोटाले बताए । त्यसमा पनि उपत्यका भित्रका ग्राहकहरुलाई निःशुल्क डेलिभरी सेवा प्रदान गर्ने सापकोटाले बताए । कम्पनीले ग्राहकलाई गुणस्तरीयताका साथ–साथै सुरक्षाको प्रत्याभुति समेत प्रदान गरेको दाबी गरेको छ ।
शपिङका साथै निःशुल्क बीमा पनि
रारामार्ट नेपालले अनलाइन सपिङ मार्केटमा पहिलो पल्ट ‘शपिङ पनि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा पनि’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । मार्टले ग्राहकलाई लक्षित गरी बीमा कम्पनीसँग मिलेर न्यूनतम २५ हजारदेखि १ लाख रुपियाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा योजना समेत ल्याउँदै छ । बीमा योजना केही दिनमा सार्वजानिक हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
यो अहिलेसम्म कुनै पनि सपिङ्ग सेन्टर तथा मार्टहरुले दिन नसकेको सुविधा भएको आयोजकको दाबी छ । कम्पनीले न्यूनतमा रु.२५ हजारको सामान खरीद गर्दा रु.२० हजार बराबरको जीवन बीमा उपलब्ध गराउने बताएको छ ।
रारामार्टः फ्रि र २४ घण्टे डेलिभरी
रारामार्ट नेपाल अनलाईन सपिङ्ग बजारको मुख्य कमजोरीलाई शुक्ष्म ढंगले अध्ययन गरी त्यस अनुसारको रणनीति तर्जुमा गरि अघि बढेको छ । ‘रारा ईन्कर्पोरेशन (नेपाल) प्रा.लि.’ का अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे सूचना प्रविधिमा आधारित व्यवसाय सबैका लागि अनिवार्य भइसकेको बताए । उनकाअनुसार रारामार्टले पहिलो चरणमा काठमाण्डौ र ललितपुरमा २४ घण्टे निःशुल्क डेलीभरीको योजना कार्यान्वयन गरेको जानकारी दिए ।
रारामार्ट निःशुल्क डेलिभरी र २४ घण्टा भित्रै डेलिभरी दिने पहिलो अनलाईन सपिङ्ग कम्पनी भएको दाबी गरेको छ । पाण्डे थपे, ‘हामीले काठमाण्डौ रिङ्गरोड बाहिर र उपत्यका बाहिरको हकमा पनि रारामार्टले अन्य सपिङ्ग कम्पनीको तुलनामा सबैभन्दा कम मूल्यमा सबैभन्दा छिटो डेलिभरी सेवा प्रदान गरिरहेका छौं र डेलिभरीमा मात्र होईनरारामार्टमा रहेका प्रडक्टहरुमा मुल्य किफायतीको दृष्टिले पनि नेपालको पहिलो अनलाईन सपिङ्ग कम्पनी हुनेगरि नयाँ रणनीति सार्वजानिक गरिनेछ ।’ साथै कम्पनीले नेपालमै पहिलो रारा फ्राईडे अभियान मार्फत अनलाइन हाट बजार कार्यक्रम बिहीबारबाटै सुरु गरेको बताएको छ ।
प्रकाशित २३ साउन २0७६ , बिहिबार | 2019-08-08 01:08:01